बाइबलका कथाहरू: येशू मरेकाहरूलाई बिउँताउनुहुन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
तिमीले चित्रमा देखेको यो केटी भर्खर १२ वर्षकी भई। येशूले उसको हात समातिरहनुभएको छ अनि उसका आमाबाबु छेवैमा उभिरहेका छन्। उनीहरू कत्ति खुसी देखिन्छन्। किन, तिमीलाई थाह छ?
यो केटीको बुबा ठूलो मान्छे हो। उसको नाउँ याइरस हो। एकदिन उसकी छोरी असाध्यै बिरामी हुन्छे। निको हुनुको साटो ऊ झन्-झन् बिरामी हुँदै जान्छे। आफ्नी छोरी मर्न लागी भनेर याइरस र उसकी पत्नी असाध्यै चिन्तित हुन्छन्। यो केटी उनीहरूको एक मात्र छोरी थिई। यसकारण याइरस येशूलाई खोज्न हिंड्छ। किनभने येशूले चमत्कारहरू गर्नुहुन्छ भनेर याइरसले सुनेको थियो।
येशूलाई भेट्टाउँदा उहाँको वरिपरि ठूलो भीड जम्मा भएको हुन्छ। तर याइरस भीडको बीचबाट छिरेर येशूको खुट्टामा घोप्टो पर्छ। उसले यसो भन्दै बिन्ती गर्छ: ‘मेरी छोरी सिकिस्त छे। कृपया उसलाई निको पारिदिनुहोस्।’ येशू ऊसित जान तयार हुनुहुन्छ।
उहाँहरू हिंड्दै गर्दा मान्छेको भीड उहाँको झन्-झन् नजिक आउँछ। अचानक येशू रोकिनुहुन्छ। उहाँ सोध्नुहुन्छ: ‘मलाई कसले छोयो?’ येशूले आफूबाट शक्ति बाहिर निस्केको महसुस गर्नुहुन्छ। यसकारण उहाँलाई कसैले छोयो भनेर उहाँले थाह पाउनुहुन्छ। तर कसले? उहाँलाई १२ वर्षदेखि धेरै बिरामी परेकी एउटी आइमाईले छोएकी रहेछ। नजिकै आएर येशूको कपडा छुने बित्तिकै ऊ च निको भइहाल्छे!
यो देखेर याइरस झन् खुसी हुन्छ। किनकि येशूले सजिलैसित निको पार्न सक्नुहुँदोरहेछ भनेर उसले देख्छ। तर त्यतिकैमा एक जना मान्छे यो खबर लिएर आउँछ: ‘येशूलाई अब दुःख नदिनुहोस्। तपाईंकी छोरी मरिसकी।’ येशूले उसको कुरा सुन्नुहुन्छ अनि याइरसलाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘दुःख नमान। तिम्री छोरी बाँच्नेछ।’
येशू याइरसको घरमा पुग्दा त मान्छेहरू शोक मनाउँदै रोइरहेका हुन्छन्। मान्छेहरूको भीडलाई येशूले यसो भन्नुहुन्छ: ‘नरोओ, त्यो मरेकी छैन। तर निदाएकी छे।’ यो सुनेर सबै जना हाँस्दै येशूको ठट्टा गर्न थाल्छन्। किनभने केटी त मरिसकी भनेर उनीहरूलाई राम्ररी थाह थियो।
त्यसपछि येशूले त्यो केटीका आमाबाबु र आफ्ना तीन जना प्रेरितलाई केटी भएको कोठामा लैजानुहुन्छ। उहाँले केटीको हात समातेर यसो भन्नुहुन्छ: ‘ए कन्या उठ!’ त्यो केटी त्यसपछि जीवित हुन्छे र तिमीले चित्रमा देखेझैं जुरुक्क उठ्छे। अनि त्यो केटी उठेर यताउता हिंड्न थाल्छे! यो देखेर उसका आमाबाबु असाध्यै खुसी हुन्छन्।
तर येशूले यसअघि पनि मरेको मान्छेलाई जिउँदो पारिसक्नुभएको थियो। उहाँले पहिलो पटक जिउँदो बनाउनुभएको मान्छे नाइन सहरकी विधवाको छोरो थियो भनेर बाइबलले बताउँछ। केही समयपछि येशूले मरियम र मार्थाको मरिसकेको भाइ लाजरसलाई पनि बिउँताउनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई राजा बनाउनुभएपछि येशूले थुप्रै मरेका मान्छेहरूलाई यसरी नै फेरि जिउँदो बनाउनुहुनेछ। कति खुसीको कुरा, हैन त?
लूका ८:४०-५६; ७:११-१७; यूहन्ना ११:१७-४४.
चित्रमा देखाइएकी केटीको बुबा को हो? उसका आमाबाबु किन धेरै चिन्ता गरिरहेका छन्?
येशूलाई भेट्टाएपछि याइरस के गर्छ?
याइरसको घरतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा के हुन्छ र बाटोमै छँदा याइरसले कस्तो समाचार पाउँछ?
याइरसको घरमा भएका मान्छेहरू येशूको कुरा सुनेर किन हाँस्दै ठट्टा गर्न थाल्छन्?
तीन जना प्रेरित र केटीका आमाबाबुलाई कोठामा लानुभएपछि येशूले के गर्नुहुन्छ?
येशूले अरू कसलाई पनि जिउँदो पार्नुभएको थियो र यसबाट के प्रस्ट हुन्छ?
लूका ८:४०-५६ पढ्नुहोस्।
रगत बग्ने व्यथा लागेकी आइमाईलाई येशूले कसरी दया गर्नुभयो र व्यावहारिक पनि हुनुभयो अनि यस घटनाबाट आजका मसीही प्राचीनहरूले के सिक्न सक्छन्? (लूका ८:४३, ४४, ४७, ४८; लेवी १५:२५-२७; मत्ती ९:१२, १३; कल. ३:१२-१४)
लूका ७:११-१७ पढ्नुहोस्।
येशूले नाइन सहरकी विधवाको निम्ति गर्नुभएको मायालु कामबाट अहिले आफ्नो प्रिय जन गुमाउनेहरूले कस्तो सान्त्वना पाउन सक्छन्? (लूका ७:१३; २ कोरि. १:३, ४; हिब्रू ४:१५)
यूहन्ना ११:१७-४४ पढ्नुहोस्।
प्रिय व्यक्तिको मृत्यु हुँदा रुनु स्वाभाविकै हो भनेर येशूले कसरी देखाउनुभयो? (यूह. ११:३३-३६, ३८; २ शमू. १८:३३; १९:१-४)